RASMI: Lionel Messi wuxuu sii joogayaa kooxda Barcelona xilli ciyaareedka cusub – Gool FM
(Barcelona) 04 Seb 2020. Xiddiga reer Argantina ee Lionel Messi ayaa daqiiqado yar ka hor ku dhawaaqay inuu sii joogi doono kooxda Barcelona xilli ciyaareedka soo socda ee 2020/21.
Lionel Messi ayaa goobjoog ka ahaa wareysi gaar ah oo uu la yeeshay shabakada “Global Goal”, halkaasoo uu si rasmi ah ugu dhawaaqay halka uu ku dambeyn doono mustaqbalkiisa xilli ciyaareedka soo socda.
33 jirka reer Argantina ayaa cadeeyay inuu xilli ciyaareedka cusub uu sii joogi doono kooxdiisa Barcelona, isla markaana uusan bixi doonin xagaagan.
Lionel Messi ayaa u sheegay shabakda “Goal”:
“Ma aanan faraxsanayn oo runtii waxaan doonayay inaan baxo, mana ii ogolaanin maamulka inaan sidaas sameeyo, sidaas darteed waxaan go’aansaday inaan sii joogo si aanan u galin khilaaf sharciyeed ee dhanka kooxda ah”.
Si walba ha noqotee, warbaahinta adduunka ayaa maalmihii la soo dhaafay oo dhan waxay si weyn u hadal hayeen in Lionel Messi uu kooxdiisa Barcelona ku wargeliyay rabitaankiisa ku aaddan inuu ka hayaamo garoonka Camp Nou xagaagan, isagoo u diray warqadda dalbashada in la fasaxo.